Xarigga Wire Wire
Fiilada Elektarooniga ee Macmiilka
Laambad Wire la habeeyo
Dhaqanka & Qiimaha Shirkadda
12 Sano In Design Design
24H Adeegga Caalamiga ah
Tirada Sare ee Badbaadada & Kalsoonida
Waxsoosaarka biraha mesh
Houd Industrial International Limited (HOUD) waa soo saaraha ugu horreeya ee mesh birta iyo isku xiraha korontada. HOUD waa qayb ka mid ah Kooxda NBC. Waxay ku saleysan tahay Magaalada Dongguan, Shiinaha, oo xafiisyo ku leh Shanghai, Dongguan (HOUD), Hong Kong, iyo USA. HOUD Waxaan dhidibada u aasnay ​​p ...
Xalka Dhismaha Dhegaha
Horumarka waqtiyada, dalabka dadka ee dhegaha -dhegta mar dambe kuma qanci doono heesaha fudud laakiin shaqooyin badan oo loogu talagalay dhegaha -dhegaha. Dalabka macmiilku wuxuu u kicin doonaa alaabta dhegaha madaxa jihada bilaa wireless iyo caqliga leh, oo ay ku jirto isdhexgalka codka, n ...
Xalalka Codsiga Awoodda UPS
by admin on 17-11-17
UPS (Nidaamka Awoodda aan kala go 'lahayn) waa koronto aan kala go' lahayn oo isku xira batteriga (badiyaa batteriga dayactirka aan-leedhka lahayn) ee kombiyuutarka martida loo yahay oo u beddelaya awoodda DC awoodda korontada iyada oo loo marayo wareegyada moodeelka sida beddeliyaha martida loo yahay. Waxaa inta badan loo adeegsan jiray in lagu ...
Xalka dalabka degdegga ah ee baabuurka forklift
by admin on 17-11-14
Horumarinta teknolojiyadda, dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka korontada si ay si weyn kor ugu qaadaan hufnaanta nolol -maalmeedka, iyo aaladahaan korantada waxay la xiriiraan lacag, oo ay weheliyaan hagitaan nabadgelyo oo u dhigma hadda, waxayna garan karaan furaha isku xiraha degdegga ah. ANEN Xidhiidhiyayaasha Sare Sare ee hadda ...
Xalka isku xiraha hogaaminaya
Horumarinta bulshada iyo hal -abuurka joogtada ah ee sayniska iyo teknolojiyadda, iskuxirayaasha iftiinka ANEN ayaa soo ifbaxaya sida waqtiyadu u baahan yihiin. Nalalkaan taxanaha ah iyo isku xirayaasha ayaa si dhaqso leh ugu xirmi kara, fududahay in la rakibo, badbaado iyo keydinta tamarta, waxay si weyn kor ugu qaadaan waxtarka ...
Xalka Iskuxirka Baabuurta Tamarta Cusub
Iyada oo ay sii kordhayaan baabuurta tamarta cusub, Dhismaha raso lacag -bixintu waxay dedejisaa baahida loo qabo isku -xiraha ayaa si dhakhso leh u kora. Iyada oo laga jawaabayo horumarka degdegga ah ee gawaarida tamarta cusub mustaqbalka, ANEN isku xiraha baabuurta tamarta cusub wuxuu leeyahay astaamaha ...
Xalka Nidaamka Saldhigga Awoodda Qorraxda
Dabeecad: Abuuridda tamarta qorraxda, iyada oo lagu salaynayo dabeecadda ay tahay ilaalinta bay'ada ilaalinta tamarta iyo maalgashiga hal mar, faa'iidada muddada dheer, hadda, waxay ku fidaysaa dhammaan waddammada horumaray si dhaqso leh, kuwaas oo dhashay "Plug-and-play" Solar connector, ANEN qoraxda ...
Xalalka Alaabooyinka Taxanaha Terminalka OT
Meelaha naxaasta ah, oo sidoo kale loo yaqaan silig, silig naxaas ah, sanka naxaasta, baloogyada terminal, iwm, ayaa loo adeegsadaa fiilada korantada korantada ee korontada ku xiran qalabka korontada dhamaadka siligga naxaasta ah ...
Xalka Isku -xirka Degdegga ah ee Baabuurka Korontada Degdegga ah
by admin on 17-11-13
Awoodda korontadu waa tan ugu Muhiimsan/Warshadaha tamarta aasaasiga ah ee kobcinta dhaqaalaha qaranka, iyada oo la horumarinayo waqtiyada, adeegsiga qalabka wargelinta awoodda korontada oo sii kordhaya; munaasabado kala duwan ayaa dalbanaya gurmadka ...
Cinwaanka: NO.20, lane2, Nanxin Road, Aagga Warshadaha 3aad, Nanzha, Humen Town Dongguan, Guangdong, Shiinaha
Taleefan: +86 400 8266 918
Telefoonka gacanta: +86 189 2553 8009
Xuquuqda daabacaadda - 2021: Dhammaan Reserved Rights.